Latest service updates July 25, 2021 ~ The ICT.com.mm Blog
Latest service updates July 25, 2021
ဆိုင်ပိတ်ရက်ကို (26-Jul-2021 ~ 01-Aug-2021) ထိတိုးမြှင့်သတ်မှတ်လိုက်ပါသည်။
(ဆိုင်သို့ကိုယ်တိုင်ယူစနစ်) ခေတ္တယာယီရပ်ဆိုင်းထားပါခြင်းကို ထပ်တိုးမြှင့်သတ်မှတ်လိုက်ပါသည်။ ဝန်ထမ်းများ၏ကျန်းမာရေး နှင့် အများပြည်သူများ ကျန်းမာလုံခြုံရေးကို ရှေ့ရှု၍ ဝန်ထမ်းများကို နေအိမ်မှတဆင့် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာများကို ဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေရခြင်းကြောင့် လူကြီးမင်းတို့ မှာ ယူထားသော ပစ္စည်းများအား ပို့ဆောင်ရာတွင် အချိန် အနည်းငယ် ကြန့်ကြာမှု ရှိနိုင်ပါကြောင်း ကြိုတင်အသိပေးအပ်ပါသည်။
ဆက်လက် အားပေးမှုကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါသည်။
အသေးစိတ် သိရှိလိုပါက FacebookPage သို့ ICT.com.mm chat box ကနေ တဆင့်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
ဖုန်းခေါ်လိုလျှင် 09765441707-10 သို့ ဆက်သွယ်လိုက်ပါနော်။
The temporary suspension period for in store pick up is extended to end on Aug 1, 2021. The interruption and minor delay of delivery service is expected.
Our customer support service team is online for your queries. Get in touch with our support team at 09765441707-10 for any questions aboutadelivery service interruption.
We thank you for continued understanding and support for the measures we’ve put in place for everyone’s safety.
Stay Home, Stay Safe, Stop From Spreading the COVID-19.
Newer Latest Service Update, July 31, 2021
Older Latest service updates July 15, 2021